Mapisarema 118 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kuonga Jehovha nekukunda kwaakaita
‘Ndakadana kuna Jah, uye akapindura’ (5)
“Jehovha ari kurutivi rwangu” (6, 7)
Dombo rakarambwa richava dombo guru repakona (22)
‘Uya anouya muzita raJehovha’ (26)
118 Ongai Jehovha, nekuti akanaka;+Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi. 2 Israeri ngaachiti: “Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.” 3 Vaya veimba yaAroni ngavachiti: “Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.” 4 Vaya vanotya Jehovha ngavachiti: “Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.” 5 Ndakadana Jah* ndichitambudzika;Jah akapindura, akandiisa munzvimbo isina njodzi.*+ 6 Jehovha ari kurutivi rwangu; handizotyi.+ Munhu angandiitei?+ 7 Jehovha ari kurutivi rwangu semubatsiri wangu;*+Ndichatarisa vaya vanondivenga ndavakunda.+ 8 Zviri nani kupotera kuna JehovhaPane kuvimba nevanhu.+ 9 Zviri nani kupotera kuna JehovhaPane kuvimba nemachinda.+ 10 Marudzi ese akandikomba,Asi muzita raJehovha,Ndakaadzingira kure.+ 11 Vakandikomba zvekuti ndakanga ndanyatsopoteredzwa,Asi muzita raJehovha,Ndakavadzingira kure. 12 Vakandimomotera senyuchi,Asi vakakurumidza kudzimwa semoto uri muminzwa. Muzita raJehovha,Ndakavadzingira kure.+ 13 Ndakasundidzirwa nesimba* kuti ndiwire pasi,Asi Jehovha akandibatsira. 14 Jah ndiye anondidzivirira uye ndiye simba rangu,Uye akava ruponeso rwangu.+ 15 Inzwi rekufara neruponeso*Riri mumatende evakarurama. Ruoko rwerudyi rwaJehovha ruri kuratidza simba rarwo.+ 16 Ruoko rwerudyi rwaJehovha ruri kusimudzwa ruchikunda;Ruoko rwerudyi rwaJehovha ruri kuratidza simba rarwo.+ 17 Handisi kuzofa aiwa, ndicharamba ndiri mupenyu,Kuti ndizivise mabasa aJah.+ 18 Jah akandiranga zvakasimba,+Asi haana kundiisa kurufu.+ 19 Ndivhurirei magedhi ekururama;+Ndichapinda nepaari ndorumbidza Jah. 20 Iri ndiro gedhi raJehovha. Vakarurama vachapinda nepariri.+ 21 Ndichakurumbidzai, nekuti makandipindura+Uye makava ruponeso rwangu. 22 Dombo rakarambwa nevavakiRazova dombo guru repakona.*+ 23 Iri rakabva kuna Jehovha;+Rinoshamisa mumaziso edu.+ 24 Iri ndiro zuva rakaitwa naJehovha;Tichafara nekufarisisa mariri. 25 Tapota Jehovha, tinokumbirawo kuti mutiponese! Jehovha, itaiwo kuti tikunde! 26 Akakomborerwa munhu anouya muzita raJehovha;+Tinokukomborerai tiri mumba maJehovha. 27 Jehovha ndiMwari,Anotipa chiedza.+ Pindai mumudungwe wevanhu vari pamutambo makabata mapazi emuchindwe,+Kusvikira kunyanga dzeatari.+ 28 Ndimi Mwari wangu, uye ndichakurumbidzai;Mwari wangu, ndichakukudzai.+ 29 Ongai Jehovha,+ nekuti akanaka;Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “pamwe nevaya vanondibatsira.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Wakandisundidzira nesimba.”
^ Kana kuti “nekukunda.”
^ ChiHeb., “musoro wekona.”